အလင်းရောင်ကြယ်များ: May 2014
ခွန်ဒီးယမ်အကောင့်ပိုင်ရှင်အား NLD ပါတီ IT Group အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆို
From : nlditgroup@gmail.com
မြန်မာပြည်၏ ဖေ့ဘွတ်လောကတွင် Celebrity အဖြစ်ထင်ရှား ကျော်ကြားလူသိများသည့် ခွန်ဒီယမ် account အား admin အဖြစ် တာဝန်ခံရေးသားနေသူများကို
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/21/2014 10:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ သတင်းသမားတွေအပေါ် ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူနေတာတွေကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီး သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ မေလ ၃ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ကမ္ဘာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မှာ Human Rights Watch အဖွဲ့၊ FIDH နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ Alt ASEAN နဲ့ RSF နယ်စည်းမခြား သတင်းသမားများအဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/03/2014 01:05:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စနေနေ့၊ ဧပြီလ 26 ရက် 2014 ခုနှစ် မဇ္ဈိမ သတင်း - မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဖြူးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ ရဲအရာရှိ နှစ်ဦးနှင့် ရဲတပ်သား ၂ ဦးတို့ကို တောင်ငူခရိုင် တရားရုံး (၁)က ဧပြီ ၂၅ရက်တွင် လူသတ်မှုထင်ရှားခဲ့သဖြင့် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်စီ ချမှတ်လိုက် သည်ဟု အသတ်ခံရသည့် လူငယ်၏ အစ်မဖြစ်သူ မမြင့်ခက်ခက်မွန်က မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
၎င်းတို့ ၄ ဦးမှာ လူသတ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း ထင်ရှားသဖြင့် ခရိုင်တရားသူကြီး မောင်မောင်အေးက
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/03/2014 12:49:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြစ်ဆုံ ရပ်ဆိုင်းရေး လမ်းလျှောက်သည့်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနား ရောက်ရန် မိုင် ၃၀သာလို
စနေနေ့၊ မေလ 03 ရက် 2014 ခုနှစ် မဇ္ဈိမ သတင်း - မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများသည် မေလ ၂ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် နမ္မတီးမြို့နယ်ခွဲတွင် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနားမြို့ရောက်ရန် မိုင် ၃၀သာလိုတော့သည်ဟု ဦးဆောင်သူ ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၃ ရက်မှစတင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး မန္တလေးမြို့ မရောက်မီ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ခြမ်း ကားလမ်းအတိုင်း ခွဲထွက်ခဲ့သည့် ကိုရဲထွဋ်ခေါင် ဦးဆောင်သော လူ၄၀ ကျော်ပါ အဖွဲ့သည် ဧပြီလ ၁ရက်တွင် မိုးကောင်းမြို့တွင် တစ်ည ရပ်နားခဲ့သည်ဟု ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က ပြောသည်။
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးရပ်ဆိုင်းရန်အတွက် ရန်ကုန်မှ မြစ်ဆုံသို့ ချီတက်လမ်းလျှောက်သူများသည် ဧပြီ ၁၉ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့သို့ ချီတက်လာစဉ် (ဓာတ်ပုံ- အောင်ကိုဦး)
“၆ ရက်နေ့ကို မြစ်ကြီးနားကို ဝင်ပါမယ်။ ၇ ရက် ၈ ရက်နေ့ကို ကျွန်တော်တို့ မြစ်ဆုံ ဖျက်သိမ်းရေးအတွက် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကို ဒီစီမံကိန်းတည်ရှိတဲ့ တန်ဖရဲမှာ ကျင်းပဖို့ ရှိပါတယ်”ဟု ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒဖော်ထုတ်သူများသည် တစ်ရက်လျှင် မိုင် ၃၀ နှုန်းဖြင့် လျှောက်ခဲ့ရာ လာမည့် မေလ ၆ ရက်တွင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့သို့ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး မေလ ၇ ရက်၊ ၈ ရက်တွင် မြစ်ဆုံ၌ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖြတ်သိမ်းရေး လူထုဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုသည်။
ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ရှေ့ဘက်ခြမ်း ကားလမ်းမှ လူ ၂၂ ဦးပါဝင်သော အဖွဲ့သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ခင်ဦးမြို့တွင် ရောက်ရှိနေပြီး ၎င်းတို့အဖွဲ့မှာ ရက်သတ္တပတ်ခန့် နောက်ကျ၍ မြစ်ဆုံသို့ ရောက်ရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု သူက ဆိုသည်။
လမ်းတလျှောက် ပြည်သူလူထုများနှင့် အလှူရှင်များထံမှ ရရှိသော အလှူငွေ ကျပ် ၁၁ သိန်းကို ဘဏ်တွင် အပ်နှံထားပြီး လက်ရှိ ရရှိသော အလှူငွေ ကျပ် ၃ သိန်းရရှိနေပြီ ဖြစ်ကာ အခြား ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက်ခြမ်း ကားလမ်းမှ လမ်းလျှောက်လာသူများ ရရှိသော အလျှူငွေများနှင့် စုစုပေါင်း သိန်း ၂၀ခန့် လက်ခံရရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအလှူ ငွေများကို မြစ်ကြီးနားမြို့မှ ကချင်လူငယ်များထံ လွှဲအပ်ကာ ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို လှူဒါန်းသွားမည်ဟုလည်း ကိုရဲထွဋ်ခေါင်က ပြောသည်။
လမ်းလျှောက်သူများက ခြေထောက်ကွဲခြင်း၊ ခြေသည်းကျွတ်ခြင်း၊ အရေကြည်ဖုပေါက်ခြင်းများ ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေးစောင့်လျှောက်မှုကို NLD နှင့် ဒေသခံ လူငယ်ကွန်ယက်တွင် ကျွမ်းကျင်သော ဆရာဝန်များ၏ ကုသမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံစားရသူများ မရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံ အာဏာပိုင်များက အနှောက်အယှက်များ မရှိသော်လည်း ဖုန်းလိုင်းများ ပြတ်တောက်ပေးခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရပြီး ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ဖြတ်သန်းခဲ့သော မကွေး၊ ချောက်၊ ရေနံချောင်း၊ ဆပ်သွား၊ ပဲခူးတိုင်းတွင် ဒုရင်ဗိုလ်မြို့၊ မန္တလေးတိုင်းတွင် ညောင်ဦး၊ မြင်းခြံ၊ စဉ့်ငူ စသည့် မြို့နယ်များ အပါအဝင် မြို့နယ် ၅၀ ကျော်တွင် ခေါင်းဆောင်များကို ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တရားစွဲဆိုထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဆန္ဒဖော်ထုတ်တာကို တရားစွဲဆိုတာက နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးရဲ့ ၅ နှစ်သာ ကာလ အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဘာမှ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါဘူး။ နိုင်ငံတကာက စောင့်ကြည့်နေပါ လိမ့်မယ်။ သမ္မတကြီးက မြစ်ဆုံကို ဖြတ်သိမ်းချင်တဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အောက်ခြေမြို့နယ် ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးက သမ္မတကြီးရဲ့ ဆန္ဒကို လစ်လျူရှုသလို ဖြစ်နေတယ်။ ပုဒ်မ ၁၈ နဲ့ တရားစွဲဆိုတာက နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေတယ်။ တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်ဖွယ် ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကို တရားစွဲဆိုမသင့်ဘူးလို့ ပြောချင်တယ်”ဟု ပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/03/2014 12:46:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူငယ်တော်များဒါနှင့် ပဲစခန်းသိမ်းတော့ မှာလား????
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/02/2014 03:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြစ်ဆုံ ရပ်ဆိုင်းရေး လမ်းလျှောက်သည့်အဖွဲ့ မြစ်ကြီး...